Dharka Dumarka Yoga |
Dharka Jir-dhiska ee Dumarka Ka-hortagga Bakteeriyada Neefsashada ee Neefsanaya
85% Polyester & 15% Spandex, fadlan dooro hotexy_retailer ka hor intaadan ku darin gaariga, iibiyaasha kale waa tafaariiqlayaal been abuur ah.
Astaamaha:Afar irbadood iyo Lix Liin tolid ayaa bixisa kaalmo sare bilow ilaa dhamaad.
Waxyaabaha:Saamiga Dahabka ah ee loo yaqaan 'Golden Ratio' oo loo yaqaan 'fabiric' ayaa ka dhigaya waxyaabo aad u fudud-culus & qoyaan tirtirmaya & xoojinta qulqulka hawada.
Cabirka Model:Xidho S, (Saraawiil) Dhererka: 34.6inch, Dhexda: 24.4inch, Hip: 29.1inch; (Sare) Bust: 29.5inch, Dhexda: 25.5inch.
Noocyada jimicsiga waxay ku habboon yihiin yoga, orodka, jimicsiga, wareegga iyo wixii la mid ah.
Suufiska E-Saaxiibtinimada Leh ee Saxarada Baran ee Dumarka Womens Workout Legging Wear
Ku habboon orodka, yoga, jimicsiga boodka, qalabka isboortiga iyo noocyada kale ee jimicsiga jirka.
Dhaqdhaqaaqa-Qalalan ee Raaxada Sare ee Isku-dhafan ee Yoga Calan Dumarka Dharka
Shaqaynta: Qalab qallalan, taageero sare, Maya Arag
Cabir: Caalamiga XXS-XXXL, US 2-14, EU 32-46, AU 4-14
Astaanta: Daabacaadda shaashadda, daabacadda silsiladda, daabacaadda, sublimate, kala-wareejinta kulaylka, iwm
Xadhigla'aan Yoga Suit 2 Qaybo Shaati Isboorti Dalagyada Sare Leggings Gym Dhar
Noocyada yoga ee aan xuduud lahayn waxay u egyihiin kuwo caato ah. Dharka dhaadheer ee dhejiska leh ee suunka dhexda leh ayaa bixiya taageero weyn oo kor u qaada qaabkaaga, wuxuu kuu keenayaa isku xirnaan. Dusha sare ee dalagga soo jiidashada leh oo muuqaal leh ayaa ka dhigaya isboortigaan mid ku habboon soo jiidasho, xodxodasho iyo qurux badan.
2 qaybood oo looxadhig ah ayaa looraacaa, dharka firfircoon ee jimicsiga iyo jimicsiga jirka
munaasabad: jimicsi, bannaanka, orodka, orodka, yoga, feerka, howlaha isboortiga
Dumarka Dumarka Sare ee Cadaadiska Isboortiga Sport Leggings Running Gym Fitness Yoga Pants
BARAXEY & XAALAD: Dharkan isboortiga waxay bixiyaan neefsasho weyn, markay qoyan yihiin, waxay si dhakhso leh uga fogaan karaan qoyaanka maqaarka, waxay kaa ilaalin doonaan mar walba. Ka sokow, maaddadu waa mid aad u jilicsan taabashada, oo ku dhowaad u dhiganta dhogor aad u jilicsan. Waxay u egtahay galoofyada laakiin ma ciriiri gabi ahaanba!Ku habboon yoga, jimicsiga, orodka, qoob ka ciyaarka Zumba, guriga iyo munaasabado kale.
Si Dhaqso ah Qalalan Jilicsan Midabka Dumarka Dharka Shaqada Dharka Yoga Fitness Wear
Noocyada dharka jimicsiga ayaa ku habboon yoga, orodka, jimicsiga, wareegga iyo wixii la mid ah.
Dharka Dumarka Jir-dhiska Jir-dhiska Dharka Dharka Bowknot Sport Yoga Set
Arag la'aan, qoyaan-qaadid, neefsashada iyo fidinta dharka ayaa bixiya caymis dhammaystiran
Kala Bixi Dharka Nylon - Ku habboon yoga, jimicsi, jimicsi, nooc kasta oo jimicsi ah, ama isticmaalka maalin kasta
Raaxo iyo Wearable - Yoga legging sidoo kale waxay ka muuqataa dhammaan dhinacyada isku dhafan si loo yareeyo xanaaqa
iyo baabi'inta cuncunka, waxay u oggolaaneysaa raaxada ugu badan iyo xirashada
Jimicsi / Jirdhis Hal Cabir Ah Oo Fudud Super Stretch Legging Women Yoga Wear
Raaxo iyo Wearable - Yoga legging sidoo kale waxay ka muuqataa dhammaan dhinacyada isku dhafan si loo yareeyo xanaaqa oo looga takhaluso jahwareerka, waxay u oggolaaneysaa raaxada ugu badan iyo wearability
Jirdhiska Jirdhiska Neefsashada leh ee Nolosha Sare ee Yoga Loogu Talo Galay Haweenka
XIDHIIDHKA SARE & TUMMY:Marka la barbardhigo qaabka 2019, haweenka cusub ee yoga yoga ee loogu talagalay 2020 waxaa loogu talagalay dhexda ballaaran ee dhexda si loo xakameeyo caloosha, waxay ku siinaysaa dhammaan taageerada iyo cadaadiska calooshaada iyo badhida si aad ugu soo noqoto qaabkeedii hore. Macsalaameyn dusha sare ee muufka iyo si aad u fiicnaato adiga.
Neefsashada Ku Haboon Inay Xidho Gabdhaha Gym Yoga Suit Firfircoon
Maaddi: 60% nylon + 35% polyester + 5% spandex, maro dhaqso lagu qalajiyo; Laastik sare, maqaar-saaxiibtinimo, dhumuc dhexdhexaad ah, qoyaan qoyan oo dhaqso u qalalan. 4-way fidsan walxaha si kor loogu qaado jilicsanaanta iyo isku-xoqidda.
Mashiinka Fidinta oo Dhamaystiran Caymis aan La Aragayn Dumarka Sport Yoga Set
【Waxyaabaha iyo Cabbirka】 nylon + polyester + spandex Cabbirka: heerka caadiga ah ee Mareykanka, Calaamadaha aan xadka laheyn waxay ku socdaan run-ilaa-cabbir. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u dhexeyso, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad kor u kacno.
Technology Teknolojiyada aan xuduudda lahayn】 Raaxo badan & Aan La Arag Iyadoo loo marayo & Ultra-Stretch Fit (dhumuc ku filan neefsashada).
Leg Kabaha Dheeriga ah ee Shaqada】 Ku muuji dharkeena fidinta tayada ugu sareysa ee qafiifinaya gooladahaaga isla markaana hagaajinaya qaabka dabiiciga ah ee dhexdaada.
Plo Caddaynta Qaybta 'Toplook Seamless Yoga Pants squat Proof, Butt Lift, oo ku habboon jimicsiga, yoga, jimicsi, jimicsi, nooc kasta oo jimicsi ah, ama isticmaalka maalinlaha ah.